Soo-saaraha Dhexdhexaadinta Isku-dhafka Dhex-dhexaadinta Dhul-bareemka, Foorno
Bogga ugu weyn / Foosto dhalaalid ah oo dhalaalaya / Foornada Cabbitaanka Baadhista / Dhexdhexaad Dhexdhexaad Induction dhalaalida Copper, Brass Furnace
Categories: Foornada Cabbitaanka Baadhista, Igbt ku sii dajinta foornada dhalaalaysa, Foosto dhalaalid ah oo dhalaalaya, Foornada Dhuxusha ee Dhuxusha Tags: foornada induction, inta jeer dhexdhexaad foornada induction, Baaxadda dhexdhexaadinta ee dhexdhexaad ah, baaxadda dhexdhexaadka ah, foorno naxaas leh, dhalaalinta foornada, foornada dhalaalaysa
Qaybta Tigreega Dhexdhexaad Xaaladda Iskudhinta Foorneynta Dhalmada, Badeecadda, Birta, Dahabka, Dahabka iyo Aluminium
Foornooyinka kuleylka dhexdhexaadka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa balaastikada birta, birta aan lahayn, birta, naxaasta, lacagta, dahabka, iyo aluminium, iwm. Awoodda wax qabadku waxay noqon kartaa 3KG ilaa 500KG.
Qaabdhismeedka mishiinka Maqaar-galinta ee MF:
Mashiinka mashiinku wuxuu ka kooban yahay koronto-dhajiye dhexdhexaad ah, magdhawga kumbuyuutarka iyo foornada, dhalada korantada kulayliyaha iyo xakameyaha heerkulka ayaa lagu dari karaa haddii la dalbado. Saddex nooc oo foornada dhalaalaya ayaa la edegi karaa iyadoo la raacayo habka lagu shubo, Waxay yihiin foorno, foorno foorno leh iyo foorno joogto ah. Marka la eego habka loo jeexay, foornada wax lagu kala qaybiyo waxay u qaybsan tahay saddex nooc: foornada gacanta lagu dhaqo, foornada korontada lagu dhejiyo iyo foornada qalabka korontada.
Tilmaamyada ugu muhiimsan ee mashiinka dhalaalaya ee MF:
Mashiinka mishiinka MF waxaa loo isticmaali karaa bakeeriyada birta, birta, birta, dahabka, dahabka, lacagta iyo wixii la mid ah.
oo ay sabab u tahay saameynta kacsan ee ay sababtay xoogga macmalka, barkada dhalaaladu waa la kicin karaa inta lagu guda jiro barxadda qalajinta si loo yareeyo dusha sare ee qulqulka iyo oksida si loo soo saaro qaybo tayo sare leh.
Iskudhafanaanta kala duwan ee 1KHZ ilaa 20KHZ, waxaa loo qaabeyn karaa isbeddelka adoo beddelaya coilka iyo tikidhada ku shaqeeyaha iyadoo la eegayo waxyaallaha wax lagu dhalaalayo, tirada, raadaynta rabitaanka, qaylada shaqada, dhalaalinta waxtarka iyo waxyaabo kale.
Waxtarka korontada waa 20% ka sarraysa mashiinka dhejiska ee SCR;
Yar iyo iftiin, moodooyin badan ayaa laga yaabaa in la ed kariyo si loo yareeyo xaddi ka duwan oo ah birta. Ma aha oo kaliya waa ku habboon tahay warshadda, laakiin sidoo kale ku habboon kuleejka iyo shirkadaha cilmi baarista inay isticmaalaan.
Moodhadhka ugu weyn iyo dhalaalidda awoodda:
Jadwalka hoose wuxuu liis-gareynayaa moodooyinka ugu muhiimsan iyo soo-jeedin kartida awoodda ugu badan. Ku saabsan 50 illaa 60 daqiiqado ayaa loo baahan yahay si loo dhameeyo hal hannaan go'an oo qumman oo foornada ah, oo leh heer kulka foornada, kaliya 20 illaa 30 ayaa loo baahan yahay.
1. MF Is-beddelka kuleyliyaha kuleyliyaha.
2. Foorno dhalaalaysa.
3. Capacitor Compensation
Foornada aluminiinka ee dhalaalaysa
Ruxruxa Roobka Caanaha leh